Warshadaha baabuurta si ay u bilaabaan wax soo saarka ilaa May 11 | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraWarshadaha baabuurta ayaa bilaabi doona Wax soo Saar ilaa iyo May 11
05 / 05 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, WADADA, Headline, baabuurta, TURKEY
warshadaha baabuurta oo dhan waxay bilaabi doonaan wax soo saarka bisha Maajo
Wasiirka Warshadaha iyo Tiknolojiyadda Mustafa Varank ayaa sheegay in dhammaan warshadaha baabuurta ee carqaladeeya wax soo saarka ay sii wadi doonaan howlahooda bisha Maajo 11, “Waxaa jira horumarro muhiim ah oo ku saabsan wax soo saarka. Warshadaha baabuurta badankood waxay bilaabeen mar labaad wax soo saar. Laga bilaabo Maajo 11-keeda, labada wershadood ee haray ayaa bilaabaya wax soo saar waxayna dhamaan warshadaha gawaarida dib u bilaabayaan howlahooda. Wasiirka Varank, oo ah kii ugu horreeyay ee 5 oo sheybaar ah oo shaybaar awoodeed oo laga furay Kocaeli usbuucii hore, ayaa sheegay in kan labaad la furi doono, “Mashruuc la mid ah kan Ankara ayaa dhawaan la bilaabi doonaa. Waxaan soo gabagabeynaynaa diyaar garowgii aan ka wada shaqeyn laheyn Rugta Warshadaha, Maamulada OIZ, Wasaaradda Caafimaadka iyo Wasaaraddeena. Waxaan sidoo kale u abuuri doonnaa shaybaar leh awood tijaabo ah oo ka badan 4 maalin kasta Ankara. ” ayuu hadlay.
Wasiirka Varank wuxuu ka soo qeybgalay "Shirkadayada Ganacsiga, Awoodaheena, Waxsoosaarka" kulanka wadajirka ah ee xubnaha ka socda Golaha Ankara ee Golaha Wershadaha iyo Madaxa Gudiga iyaga oo adeegsanaya qaabka kulanka fiidiyaha. Madaxweynaha Rugta Warshadaha ee Ankara Nurettin Özdebir ayaa uga mahadceliyay dowladda shaqadooda intii lagu guda jiray howsha Covid-19. Wasiir Varank wuxuu kaloo sheegay in warshadleyda ay qaadeen talaabooyin u gaar ah si ay shaqadooda ugu sii wataan halka ay ka baxeen markii uu cudurka faafay. Wasiir Varank wuxuu khudbadiisa ku yiri:
TEST GUUL siiyey TURKEY: Turkey, siiyey baaritaan guulaha lama filaan ah tan caalamka, dhawraa on siinayo. Waxaan galnay xilli ay faafidda iyo tirada bukaannada cudurkan faafa si joogto ah hoos ugu dhacday. Guushaani shaki la'aan waxaa mahad leh talaabooyinka aan qaaday ee isku duubnida hogaaminta Madaxweynahayaga. Waxaan ka hirgelinay siyaasado la taaban karo oo firfircoon dhammaan dhinacyada min caafimaadka ilaa waxbarashada, amniga ilaa gaadiid. Waxaan si qoto dheer u fikirnay, kumaanaan dhaqaaqin argagax.
ANIGU UMA AQBARAN SAMEE SIYAASADAHA XAQIIQADA: Bilowgii cudurka dillaaca, waxaan si taxaddar leh u tixgelinnay dhammaan codsiyada iyo talo soo jeedinta. Waxaan ku dhawaaqnay barnaamijyo taageero gaar ah iyada oo loo marayo KOSGEB, TÜBİTAK iyo hay'adaha horumarinta. Waxaan u suuroggalnay inaan meel fog ka shaqeyno xarumaha teknolojiyada iyo xarumaha R&D. Weligeen ma aanan helin qaab sida xiritaanka warshadaha. Intii lagu gudajiray xayiraada, marka lagu daro qeybaha wareega wareega ee Wasaaradda Arimaha Gudaha, 16 shirkadood ayaa sii waday wax soo saarkooda iyaga oo la kaashanaya agaasimeyaasha gobolka iyo qolalka warshadaha.
GUULIDDA R&D DHAQANKA: Xitaa waxaan ka yareynay qalabka neefsashada degdegga ah ee deegaanka khadadka wax soo saarka tiro laba toddobaad gudahood. Kuwaani dabcan maahan dhacdo. Nadaamka R&D ee aan ka dhisnay burburka 18 sano ayaa ahaa naqshadeeye ugu muhiimsan ee guushaan. Tani ecosystem sii kordhaya oo aad u yar yar ku bilaabatay-ups in lacagta laga taageero ee wasaaradda ma aha oo kaliya in ay dalka Turkiga, ahaa aad rajeyn karto in ay dunida oo dhan.
KU SOO DHAWEYNTA Degmooyinka Kale: Annaga oo kaashanayna Biosys, Baykar, Aselsan iyo Arçelik, waxaan awoodnay in aan soo saarno aalad heer caalami ah muddo 14 maalmood ah oo ay naga go’an tahay dadaal iyo dadaal. qalabka ka sokow iyagoo jooga neefta Turkey, Soomaaliya ayaa sidoo kale neefsashada. Waxay sidoo kale u neefsan doontaa waddamada kale ee baahan. Shalay oo keliya, waxaan kahadalnay guusha UAVs iyo SİHAs. Maanta, qalabkeenna daryeelka degdegga ah ee neefsashada ayaa ah ajandaha koowaad meel kasta.
11 MAY KARIIM: Waxaa jira horumarino muhiim ah oo ku saabsan wax soo saarka. Warshadaha baabuurta badankood waxay bilaabeen mar labaad wax soo saar. Laga bilaabo Maajo 11, dhammaan warshadaha waaweyn ee gawaarida ee waddankeenna ayaa mar kale bilaabaya howlahooda. Waxaan ognahay in qaar ka mid ah shirkadaha dharka sameysan ay bilaabayaan inay furaan. Iyada oo si caadi ah loo raaco suuqyada wax lagu kala iibsado iyo kanaalada dhoofinta, waaxdu si dhakhso leh ayey u soo kabaneysaa.
5 RAADINNADA FULINTA: Waxaan kaa sugeynaa 5 filasho oo aasaasi ah. Marka ugu horreysa, waa inaad hubisaa caafimaadka shaqaalahaaga. Waa inaad u qorsheysaa geedi socodka si aad u wanaagsan. Faahfaahin kasta waa mid aad u muhiim ah marka loo eego nidaamka fadhiga ee adeegyada illaa loo wareejiyo warshadaha.
SHAQADA LABAAD EE ANKARA: Waxaan ka bilownay mashruuc tijaabo ah Kocaeli, oo ah mid ka mid ah magaalooyinka ay ku dhufato wadnaha wershaduhu. Iyada oo ay weheliso Wasaaradda Caafimaadka, labo shaybaar oo leh awood tijaabo oo maalin kasta ah 5 kun ayaa laga sameeyay Jaamacadda farsamada ee Gebze si ay ugu adeegto kaliya warshadaha. Mashruuc la mid ah kan Ankara ayaa dhawaan la bilaabi doonaa. Waxaan soo gabagabeyneynaa diyaar garowgii diyaarinta annaga oo kaashanayna Rugta Wershadeynta, Maamulayaasha OIZ, Wasaaradda Caafimaadka iyo Wasaaraddeena. Sheybaar leh awoodo tijaabo ah in kabadan 4 kun maalin kasta ayaa sidoo kale laga dhisayaa Ankara.
U DARO CAAFIMAADKA CAAFIMAADKA: Xilliga soo socda, waxaan ka bilaabi doonnaa tijaabooyinka baaritaanada ah Istanbul, Bursa iyo Tekirdağ. Dhamaadka Maajo, waxaan hadda rabnaa inaanu nidaamkan ku hawl galno dhammaan OIZs. Sidaas awgeed, waxaan si dhow ula socon doonnaa caafimaadka shaqaalaheenna.
QORSHAYAASHA DIIWAANKA: Waxaan rajeyneynaa labaad in aad tahay qof firfircoon. Markay baahidu bilaabato inay soo nooleyso, waa inaad awood u yeeshaa inaad ku quudiso suuqa sida ugu fiican. Markaa aan qorsheyno tillaabooyinka ku siin doona faa'iido tartan. Aynu qaabaynno qaababka dardargelin doona go'aannada maalgashigaaga, kordhin doona saadaalin ama u fududayn doona dhibaatada maalgelinta.
XAALADAHA NOLOSHAADA: Saddexaad, adkee booskaaga silsiladaha sahayda. La xiriir shirkadaha caalamiga ah ee ka shaqeeya warshadahaaga. U samee dalab si ay u noqdaan alaab-qeybiyeyaashooda. Raadi lammaaneyaal cusub, u fur suuqyada cusub. Raac wicitaanada aan ka furi doonno gudaha baaxadda Barnaamijka dhaqaajinta Warshadaha Awoodaha Teknolojiyada ah.
LACAG KA DHACA: Tan afraad, waxaad xooga saartaa kordhinta heerarkaaga meelaynta. Faafidaani waxay dib u xaqiijisay sida ay muhiimka u tahay isku filnaanshuhu. Maaddaama ku tiirsanaanta waddamada kale ee wax soo saarka ay hoos u dhacdo, caabbinta jahwareerka dibedda ayaa sidoo kale kordhaya. Samee moodallo ganacsi oo kobciya habab kala duwan oo wax soo saar, khadad wax soo saar cusub iyo fikrado cusub. Waligaa ha joojin maalgashiga R&D, hal-abuurka iyo ilaha aadanaha.
MUUQAAL KU SOCODKA DIGITAL: Tan shanaad iyo ugu dambayntii, waxaan si xoog leh ugu talinayaa maalgashiga tikniyoolajiyada dijitaalka ah. Iyadoo aan loo eegin qaybta aad ka shaqeyso, iskuday inaad la dhex gasho tikniyoolajiyada dijitaalka ah. Naqshadeyso oo hirgeli qaababka u qaadi kara mugga ganacsigaaga jawiga dhijitaalka ah.
Elvan 2019 Waxaan dooneynaa in aan soo qaadanno Tareenka Qaranka ee HSS si aan ula socdo
Eurasia Tunnel Waxay Ku Bixineysaa Saacadda 24 Dhamaadka Bilaha
U guuridda Garoonka diyaaradaha ee Istanbul waxaa la dhameeyaa Maarso
Seger wuxuu la kulmaa Automotive Exporters ee Colombia iyo Peru
Wadada Balıkesir Gar waxay ahayd Green
Suuqyada Cusub ee Kaararka Cusub ee Cusub ee Uludağ ayaa bilaabi doona Maajo
2017 oo ku aaddan tareenka Izmit ayaa bilaabi doona bisha May
Suuqa Beeraha Dijital ah ayaa qof walba ku dhiiri-galin doona soo-saarka